Vaovao - fahitana anatiny momba ny fanatanjahan-tena amin'ny fironana indostrian'ny fanatanjahantena
Nahazo orinasa Mirror i Fitness i Lululemon
Lululemon dia nanao ny fahazoana tambabe voalohany hatramin'ny nananganana azy, ary nandany 500 tapitrisa $ hividianana orinasa Mirror. Calvin McDonald dia naminavina fa hahazo tombony ny Mirror amin'ny 2021. Ny vokatra fototra an'ny Mirror dia "fitaratra lava". Rehefa mikatona dia fitaratra mahazatra manontolo. Rehefa nosokafana, ny fitaratra dia fampisehoana fitaratra mifandray miaraka amina fakantsary sy mpandahateny tafiditra ao anatiny, izay taratry ny satan'ny mpampiasa sy ny angon-drakitra arak'asa an-tariby amin'ny fotoana tena izy, ary afaka mamita fampianarana mivantana miaraka amin'ireo mpampianatra mampatanjaka amin'ny Internet ihany koa.
Tamin'ny 10 Desambra, namoaka ny tatitry ny fampisehoana tamin'ny telovolana fahatelo i Lululemon. Ny varotra ho an'ny telovolana dia nitombo 22% isan-taona tamin'ny US $ 1,117 miliara, ny tombom-barotra marobe dia nitombo tamin'ny 56%, ny tombom-barotra net dia nitombo 12,3% ka hatramin'ny 143 tapitrisa dolara amerikana ary nitombo avo roa heny ny sandan'ny tsena. Adidas. Ny fahombiazan'i Lululemon dia tsy azo sarahina amin'ny traikefan'ny mpanjifa sy ny fisafidianana ny foto-kevitra antsinjarany sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampianatra yoga sy andrim-piofanana sasany. Voalohany, omena akanjo yoga maimaimpoana ny mpampianatra, mba hanaovan'ny mpampianatra akanjo yoga Lululemon hampianarana. Ireo mpampianatra ireo koa dia nanjary “ambasadaoron'ny marika” an'i Lululemon hanatsarana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika. Mandritra izany fotoana izany dia nandefa andiana akanjo ho an'ny lehilahy sy vokatra peripheral hafa ary traikefa ivelan'ny Internet mba hampitomboana ny mpihaino ny marika sy ny fividianana faniriana.
Nentin'ny fiakaran'ny fahasalaman'ny trano, nihatsara tsikelikely ny fivoaran'ny indostrian'ny fanatanjahan-tena anaty. Particle Mania dia marika fanaovana fanatanjahan-tena. Ny vokatra vokariny dia manasongadina fandrosoana indroa amin'ny hatsarana sy ny asa-tanana. Izy io dia manolo ny foto-kevitry ny lamaody avo lenta amin'ny famolavolana ny fanatanjahan-tena, ary manandrana mijery ny mety ho an'ny fanatanjahan-tena amin'ny fomba fijery isan-karazany amin'ny haitao, ny kolotsaina ary ny zavakanto. Marika fanatanjahantena farany ambony an'ny mpamorona an'i Carver. Tamin'ny 13 Novambra 2020, ny marika fanatanjahan-tena Particle Fanatic dia nahavita famatsiam-bola 100 tapitrisa yuan C.
Eo ambany fitarihan'ny valanaretina, mivoatra haingana ny indostrian'ny fanatanjahantena, ary tsy azo odian-tsy hita ny fiakaran'ny tsenan'ny vehivavy miompana anaty trano. Izy io dia azo jerena amin'ny fanombohana nifandimby ny tsipika yoga tamin'ny marika lamaody sy fanatanjahantena fialamboly toa an'i NIKE sy PUMA. Tamin'ity indray mitoraka ity, tamin'ny fiandohan'ny volana martsa tamin'ity taona ity, Adidas sy Nini Sum dia niara-niasa hanangana vanim-potoana vaovao modely fiaraha-miasa ho an'ny vehivavy; aingam-panahy avy amin'ny zavakanto isan-karazany toy ny fanaovana pirinty sy sary an-drindrina an-tsokosoko, miaraka amin'ny lamina kanto voajanahary voajanahary amin'ny tanana, nanaitra ny taranaka vehivavy vaovao. Mamolavola sokajy marobe, mety amin'ny fisaintsainana yoga, mihazakazaka aerobika ary fanatanjahan-tena hafa.
Manahy momba ny fanatanjahan-tena sy ny fahasalaman'ny vehivavy ny NIKE, nanokatra ofisialy ny hetsika yoga ho an'ny mpanjifa vehivavy VIP, izay nahitana ny fizarana fahalalana momba ny fahasalamana nataon'ny ambasadaoron'ny vehivavy NIKE sns. Faharoa, nanangana andiana yoga vaovao ihany koa i NIKE, nitondra traikefa fanatanjahan-tena tsara kokoa ho an'ireo olona tia yoga, ary manome hery sy tanjaka ary hery izay mbola tsy nokasihiny mihitsy; ankoatry ny lamaody lamaody, dia mifantoka bebe kokoa amin'ny lamba miasa izy ireo ary mandray ambony tsy manam-paharoa DRI-FIT haingana fanamainana haingana. ny harerahana.
Miorina foibe any Munich, Veloine no mpandresy tamin'ny loka ISPO2021 Fall Winter Award. Veloine dia marika bisikileta premium natao ho an'ny vehivavy. Ny marika dia manamafy fa vehivavy maro no mbola maniry ny hanao fanatanjahan-tena mandritra ny fitondrana vohoka. Noho ny rantsambatana bevohoka dia matetika izy ireo no tsy mila manao akanjo bisikileta ho an'ny lehilahy, izay tena tsy mifanaraka amin'ny firafitry ny vehivavy bevohoka. Veloine dia nanamboatra akanjo bisikileta vehivavy bevohoka ho an'ny vehivavy bevohoka. Series, tafiditra ao anaty endrika matihanina, mitondra fiarovana ny vehivavy bevohoka.